Fitbit Versa: Famaritana ny smartwatch vaovao mora vidy | Androidsis
Fitbit dia iray amin'ireo marika malaza amin'ny sehatry ny smartwatch. Sehatra iray izay nitombo nandritra ny fotoana elaela, fa amin'ny fijerena miaraka amin'ny Android Wear (Wear OS ankehitriny). Ny marika dia manolotra ny smartwatch vaovao, iray amin'ireo mora indrindra hitantsika eny an-tsena. Momba ny Fitbit Versa io.
Miatrika famantaranandro iray izahay izay ny aingam-panahiny dia nentanin'ny marika hafa eny an-tsena. Na dia mamela antsika koa amin'ny sasany amin'ireo famaritana mahaliana indrindra. Ka ity Fitbit Versa ity dia mamela antsika hanana fahatsapana tsara. Inona no azontsika antenaina amin'ny famantaranandro vaovao an'ny marika?
Ny famolavolana ny famantaranandro dia toa notsindrian'ny Apple Watch, ny famantaranandro manjaka eo amin'ity tsena ity ankehitriny. Saingy tsy zavatra ratsy ny aingam-panahy, raha tsy tena mandika. Ka amin'ny sary dia afaka mahita fitoviana vitsivitsy isika, fa tsy misy toa ny dika mitovy amin'ny smartwatch an'i Apple.
Ny Fitbit Versa dia tsy tonga miaraka amin'ny Wear OS eny an-tsena. Izy io dia famantaranandro multiplatform, izay ho mifanaraka amin'ny Android, iOS ary Windows Phone. Navoaka tamin'ny mpihaino marobe kokoa izy ireo. Satria misy afaka mampiasa ity famantaranandro ity.
Ny batterie Mampanantena izy io fa iray amin'ny tanjaky ny Fitbit Versa. Satria hanome antsika 4 andro eo ho eo ampiasaina izany, na dia mety ho bebe kokoa na latsaka aza izy ireo miankina amin'ny fomba fampiasanao ity famantaranandro ity. Ankoatr'izay, ankoatry ny asa hafa, manana fandoavam-bola NFC. Izy io koa dia hanao asa mahazatra toy ny fanaraha-maso ny fitepon'ny fony sy ny fampihetseham-batantsika. Ilay fiambenana azo asitrika hatramin'ny 50 metatra.
Amin'io lafiny io dia hitantsika fa ny Fitbit Versa dia smartwatch nentim-paharazana, natao ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena. Saingy manana asa fanampiny tokony hodinihina koa izy io. Satria hampandre antsika antso, hafatra na hetsika izany. Ho fanampin'izay, manana fahatsiarovana anatiny izahay mamela antsika hitahiry hira mihoatra ny 300. Mety amin'ny fihainoana rehefa manao fanatanjahan-tena. Mampanantena ny smartwatch fa hanampy amin'ny fanaraha-maso torimaso koa, miaraka amin'i sensor izay manampy amin'ny fisamborana apnea.
Hanomboka eny an-tsena tsy ho ela ny fiambenana. Ho hita amin'ny loko isan-karazany sy ny fehy fitambarana. Ny fitambaran'ity Fitbit Versa ity dia misy amin'ny vidiny 199 euro. Na dia vidiana 229 euro aza ireo kinova manokana. Ahoana ny hevitrao amin'ny famantaranandro vaovao an'ny marika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fitbit Versa: rindrambaiko finday mora vidy amin'ny marika
Vivo V9, endri-javatra, horonantsary fandefasana sary ary sary tafaporitsaka bebe kokoa